National Power News:: के गर्दैछन् ‘सेल्फ क्‍वारेन्टाइन’मा बलिउड कलाकार ? National Power News:: के गर्दैछन् ‘सेल्फ क्‍वारेन्टाइन’मा बलिउड कलाकार ?
मुम्बई — सेल्फ क्‍वारेन्टाइनमा बसेका अभिनेता सलमान खानले आफ्नो खाली समय स्केचिङमा लगाएका छन् । कोरोना भाइरस-कोभिड-१९ बाट सतर्कता अपनाउन मार्च ३१ सम्मलाई फिल्मको सुटिङ रोक्ने निर्णयसँगै उनको फिल्म राधेस् योर मोस्ट वान्टेड भाइुको सुटिङ पछाडि धकेलियो ।
क्वारेन्टाइनमा समय बिताइरहेका बलिउड अभिनेता खानले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा स्केचिङ गरेको भिडियोसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । त्यस्तै अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र उनका पति निक जोनस आठ दिनका लागि सेल्फ आइसोलेसनुमा बसेका छन् । उनले इन्स्टाग्राम भिडियोमा भनेकी छिन्म र निक ८ दिनका लागि सेल्फ आइसोलेसनमा छौं । हामीले सँधै धेरै मानिसहरुको वरपर बसेर काम गर्‍यौं । अहिले अवस्था फरक छ । यो एकदम अनौठो अनुभव हो । हामी सतर्कता अपनाइरहेका छौं । हामी सुरक्षित छौं, सोसल डिस्ट्यान्सुको अभ्यास गर्दैछौं ।
अभिनेता अमिताभ बच्चनले त आइसोलेसनमा बसेर कविता कोरेको कुरा इन्स्टाग्राममार्फत जानकारी गराएका छन् । उनले आफ्नो कविताबाट दर्शकलाई सुरक्षित रहन सन्देश दिएका छन् । अमिताभले आफू क्वारेन्टाइनमा बसेको कुरा इन्स्टाबाटै जानकारी दिएका हुन् । हातमा स्ट्याम्पलेुहोम क्वारेन्टाइनु लेखिएको तस्बिर उनले सार्वजनिक गरेका छन् ।
त्यस्तै अभिनेत्री कट्रिना कैफले यो खाली समयमा जिम बन्द भएपछि घरमै जिम गरेर समय काट्ने सोचेकी छिन् । उनको इन्स्टा भिडियोमा शारीरिक अभ्यासले शरीरलाई रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने बताएकी छिन् । फिटनेससँगै सेल्फ आइसोलेसनुको समयमा कट्रिनाले गीतार बजाउने समय पनि पाएकी छिन् ।
अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले इन्स्टाग्राममा माक्स लगाएर हात धुँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक गरेकी छिन् । अभिनेता आयुष्मान खुरानाले श्रीमती, छोराछोरीसँग पेन्टिङ गरेर सेल्फ क्वारेन्टाइनुको समय बिताएका छन् । श्रीमती तहिरा कश्यप, छोरा विराजवीर र छोरी भरुस्कासँग पेन्टिङ गरेको तस्बिर आयुष्मान सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । अभिनेत्री करिना कपूरले भने आफूलाई मन पर्ने परिकार बनाउन समय व्यतित गरेकी छिन् । उनले घर बसेर गाजरको हलुवा खाँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक गरेकी छिन् । अभिनेता अर्जुन कपुरले भने पूराना फिल्महरु हेर्ने समय पाएका छन् । उनले हालै फिल्म हेराफेरीु हेर्दै गरेको जानकारी इन्स्टाग्राममा राखेका छन् ।
सुटिङ स्थगित गरेसँगै कलाकारहरुले परिवारका लागि समय पाएका छन् । सेल्फ क्वारेन्टाइनुको समयमा अक्षय कुमारले पनि परिवारलाई समय दिन पाए । यसखघि उनी सूर्यवंशीुको प्रचारमा व्यस्त थिए ।अहिले माधुरी दीक्षित पनि आफ्नो परिवारसँग समय बिताइरहेका छन् । अभिनेत्री कंगना रनावत मनाली पुगेकी छिन् । अभिनेत्री सोनम कपुर भने परिवारसँग समय बिताउन लन्डनमा पुगेकी छिन् । त्यस्तै नेहा धुपिया आफ्नी आमासँग अनि राधिका आप्टे लन्डनमा रहेको पतिसँग सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्न पुगेकी छन् ।